Naya Post Nepal | समिक्षा र पल काण्ड सेलाउन नपाउदै १५ वर्षकी नानीलाई सु’त्केरी बनाएर अहिले पति फ’रा’र,प्रहरीले समेत यस्तो गरे (भिडियो हेर्नुस्)
समिक्षा र पल काण्ड सेलाउन नपाउदै १५ वर्षकी नानीलाई सु’त्केरी बनाएर अहिले पति फ’रा’र,प्रहरीले समेत यस्तो गरे (भिडियो हेर्नुस्)
कथुवान घर भएर ब’सोबा’स गर्दै आएकी मनु तामाङ नाम गरेकी एक १५ बर्षिया नाबालिका जसले कम उमेरमै बिबाह गरेकीछिन, उनै बालिकाले आफूलाई एक महिनाको सु”त्केरी अबस्थामा श्रीमा नले अ”लपत्र पारेर छोडेको र प्रहरीको कु”टपिट समेत स”हनुपरेको भन्दै रु”दै
मिडियाकर्मिलाई फोन गरेकी थिइन र मिडिया उनी भएठाउँमै आइपु गिसकेको छ । २० बर्षिय अमिर घोले नाम गरेका उनका श्रीमान जो पेशाले एउटा गाडिचालक रहेका छ्न, उनलाई रातदिन कु”ट्ने गरेको र कहिले राम्रो व्यवहार नगरेको उनको गु”नासो छ ।
एक बर्षअगाडि बिबाह भएकी उनले अहिले एउटा छोरीलाई पनि जन्म दिएकी छिन तर छोरी जन्मिएसँगै श्रीमानको भने कुनै खबर छैन ।
श्रीमानले नै फ”काई”फुल्याई आफूसँग बिबाह गरेको अहिले आफ्नो स्वा”र्थ पूरा भएपछि वा”स्ताकिस्ता नै नगरेको उनको गु”ना”सो छ ।
पेटमा गर्भ रहँदा से”क्स गर्न श्रीमानले ज”बर्जस्ती गरेको र नदिए पछि श्रीमानले घाँ”टी नि”चोरेको उनले बताइन । तिहारमा दाजु भाईलाई टीका लगाउन जान्छु भन्दा पनि श्रीमानले नदिएको र ढो” का थु”ने”र राखेको उनको भनाई छ ।
हेर्नुस तलको भिडियोमा:-
यो पनि ,,भ्वाइस अफ नेपाल किड्सका बिजेता जेनिस उप्रेतिको स्वरमा ‘बाटो’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । जेनिसलाई उ नकै को’च प्रमोद खरेलले स्वरमा साथ दिएका छन् । सा’र्वजनक गीतमा भुपेन्द्र खड्काको शब्द, भानुभक्त ढकालको संगीत र गोपा ल रसाइलीको एरेन्ज रहेको छ ।
जेनिसको वास्तविक कथासँग मेल खाने कथामा गीत तयार पारिए को छ । गीतको भिडियो हेर्दा उनको वास्तविक कथा नै देखाउन खो जेको स्पष्ट हुन्छ । प्रमोद खरेलको कन्सेप्ट तथा निर्देशन
रहेको भिडियोमा लक्ष्मी बर्देवा, जेनिस उप्रेती, लोकराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल लगायतको अभिनय रहेको छ । अर्जुन तिवारीको छायाँकन रहेको भिडियोमा मिलन बिश्वकर्माको सम्पादन रहेको छ ।
भिडियोमा जेनिसकी आमाको भूमिकामा काम गरेकी लक्ष्मीले आफु लाई यो चरित्र सायद गर्नु नपरेको वा परिस्थिति फ’रक भइदिएको भ ए हुने जनाएकी छिन । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सेयर गर्दै उ नी भन्छिन – कुनै चरित्र सायद गर्नु
नपरेको भए हुन्थ्यो अथवा गर्नै पर्दा पनि परिस्थिति फ’रक भैदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने रहेछ ! धेरैलाई थाहा पा’इसक्नु भयो होला मैले भन्न खो’जेको स’न्दर्भ थाहा नहुनेले पनि भिडियो हेर्दै गर्दा थाहा पाउनु हुनेछ !
यो पनि ,,यतिबेला नेपाली कला क्षेत्र अभिनेता पल शाह प्रकरणले तरं’गित छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाहवि’रुद्ध ज’ब र्ज’स्ती क’र’णीको आरोपमा उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रह री हिरासतमा छन् । प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनु’सन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली से’लेब्रि’टीहरु खु’ल्न थालेका छन् ।
सुरुको समय यस बिषयमा अ’धिकां’श कलाकर्मी मौन थिए । तर प छिल्लो दिनमा भने सेलेब्रिटीहरु एकपछि अर्को गर्दै खु’ल्न थालेका हुन् । उनीहरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन,नारीको सम्मान गर्न र बाल बालिकाहरुका अधिकारको र’क्षा गर्नसमेत आह्वान छन् ।
अब यो विषयले कला क्षेत्र मात्रै नभएर राजनितिकर्मि हरुको पनि ध्या’न खिचेको छ । राजनीतिक वृत्तबाट पहिलो टि’प्पणी पूर्वप्रधान मन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेता डा. भट्टराईले ट्विटर’मार्फत् आ फ्नो धारणा राखेका हुन् । उनको सहानुभूति नाबालिग गायिका प्रति छ । डा. भट्टरार्ईले लेखेका छन्, ‘नाबालिग किशोरीको यौ’नशो’षण सम्बन्धी अतिसंवेदनशील मुद्दामा पहिलो दृष्टिमै पी’डितप्र’ति सहानु भूति–समर्थन
हुनुपर्नेमा सामन्ती पि’तृसत्तात्मक ‘मर्दकी दशवटी’ मानसिकता बो केर पी’डकको पक्ष लिनु लज्जास्पद कुरा हो ।’ उनले लोकतन्त्रमा न्यायिक फैसला सबैले मान्नुपर्ने भन्दै सुरुमै न्याय प्रभावित हुनु नहु नेमा जो’ड दिएका छन् ।
यस अघिनै सिने क्षेत्रबाट रेखा थापा, दिपकराज गिरी, विनिता बरा ल, ऋचा शर्मा ,सञ्चिता लुइँटेल,लक्ष्मी बर्देवा,श्रृङ्खला खतिवडा, पुजा शर्मा लगायतले आफ्नो धारणा सा’र्वज’निक गरि सकेका छन् ।
२०७८ फाल्गुन २०, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 581 Views